Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Vonona sy dodona ny hisidina indray ny mpandeha sinoa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Maherin'ny antsasaky ny valim-panontaniana natao tamin'izy ireo no nilaza fa vonona ny hivoaka ny tanibe Shina izy ireo raha vao misokatra ny sisintany, ary i Azia atsimo atsinanana no faritra voafidy arahin'i Eropa, Aostralia / Nouvelle Zélande ary Azia Atsinanana.
Roa ampahatelon'ny mpitsangatsangana sinoa no nanao sidina an-trano hatramin'ny nanombohan'ny aretin'ny COVID-19.
81 isan-jaton'ny valin-kafatra fanadihadiana no nilaza fa mikasa ny hisidina kely farafaharatsiny ao anatin'ny 12 volana manaraka.
Amin'ireo mikasa ny hivezivezy dia 73% no hivezivezy amin'ny fialam-boly, ary ny 24% ihany no handamina fitsangatsanganana.
Araka ny fanadihadiana farany momba ny indostrian'ny dia dia 96% ny mpandeha ao Shina vonona ary mikasa ny handeha fiaramanidina ato ho ato.
81% amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana dia mikasa ny hanidina farafahakeliny indray mandeha ao anatin'ny 12 volana ho avy ary 50% mikasa ny hanidina amin'ity fararano ity.
Amin'ireo mikasa ny hivezivezy dia 73% no nilaza fa fialam-boly tsy misy afa-tsy fitsangatsanganana 24%.
Ny fangatahana mihoampampana dia hita taratra amin'ny Shinafifamoivoizana ataon'ireo mpandeha, izay mampiseho famantarana ny fanarenana matanjaka. Tamin'ny volana septambra 2021, ny fifamoivoizana any Shina dia teo amin'ny 87% n'ny haavon'ny 2019 - nialoha lalana ny sisa tany Azia (42%).
Ny fanadihadiana dia nanambara fa ny roa ampahatelony (66%) amin'ireo mpandeha sinoa dia nanao sidina an-trano hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ny angon-drakitra dia manambara fa ny fitsangatsanganana an-trano ao amin'ny Q4 dia efa nialoha ny ambaratonga talohan'ny areti-mifindra, nitombo 15% raha oharina amin'ny Q4 2019.
Taorian'ny fameperana am-bolana maro nateraky ny politika Zero-COVID any Shina, miharihary ny fitomboan'ny fangatahana fiverenana lehibe amin'ny dia iraisam-pirenena sy isam-paritra.
Maherin'ny antsasaky (61%) ny valim-panadihadiana no nilaza fa vonona ny hivoaka ny tanibe Shina vantany vao misokatra ny sisintany, ka i Azia atsimo atsinanana no faritra voafidy voalohany, arahin'i Eropa, Aostralia / Nouvelle Zélande ary Azia Atsinanana.